I-2BHK Ifulethi elihle endaweni yase-rustic.
Salvador do Mundo, Goa, i-India
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Celiz
Indawo ekahle yokubalekela abathandi bemvelo abashisekayo. Leli fulethi likanokusho lisendaweni yase-Salvador Do Mundo, eqhele ngamakhilomitha ambalwa ukusuka e-Porvorim. Inikeza ukubukwa okumangazayo okungavinjelwe kwamasimu ahlanzekile namachibi emvelo. Ifulethi lifakwe ifenisha ye-Indo Portuguese nezinto zobuciko ezingavamile ze-Goan. Sifake nezinti zokudoba kulabo abazimisele ukuzama inhlanhla emachibini aseduze kanye nezibonakude zokubuka izinyoni.
Itholakala nje imizuzu eyi-10 ukusuka esiphithiphithi sase-Porvorim. Ingabe idolobhana elincane laseSalvador do Mundo (uMsindisi womhlaba).
Njengoba ungena kuleli dolobhana uzohlangatshezwa izinto ezimangalisayo zamasimu ahlanzekile, lapho uzobona abalimi bendawo belima izilimo kanye namachibi emvelo lapho umuntu engabona khona abantu bendawo bezama inhlanhla yokugoduka nomklomelo wabo wokubamba izinhlanzi. usuku.
I-Salvador Do Mundo inomlando ojulile ozungeza amathempeli asukela ekhulwini le-16 futhi iyikhaya lesonto loMsindisi womhlaba idolobhana eliqanjwe ngalo.
Ngokuhambisana nesiko namasiko e-Goa, sibonise okufanayo ekwakhiweni nasesitayelani saleli fulethi.
Ifulethi lifika lifakwe ngokuphelele zonke izinsiza zekhaya likanokusho kanye nezinto zobuciko eziyivelakancane zaseGoan eziqoqwe eminyakeni edlule ngumnikazi. Kunamakamelo okulala amabili amakhulu anamagumbi okugezela anamathiselwe, womabili amakamelo ane-balcony enkulu enikeza umbono omangalisayo wedolobhana. Igumbi lokuphumula livulekile nge-balcony enkulu lapho umuntu engajabulela khona itiye noma ikhofi lasekuseni ngenkathi ebuka ukuphuma kwelanga. Uzoqaphela futhi ukuthi ifenisha egumbini lokuphumula i-Indo Portuguese. Thatha isikhashana ukubuka ama-artifact, ngayinye inendaba yayo nomlando. Siphinde sibe ne-Wi-Fi esheshayo.
Ifulethi ngokuvamile livakashelwa omakhelwane abanobungane abanezimpaphe. Idolobhana lidlala izinhlobo zezinyoni ezingaba ngu-15. Sithole injabulo yokufaka i-binoculars, ukuze ukwazi ukubuka izinyoni kancane ngesikhathi sakho samahhala. Siphinde sagcina izinti ezimbalwa zokudoba uma ungathanda ukuzama isandla sakho ekudobeni echibini eliseduze. Uma kwenzeka ukunqanyulwa kwamandla okungajwayelekile, ifulethi lifakwe i-inverter ukuze kube lula kuwe.
Leli fulethi lilungele imibhangqwana nemindeni ethanda imvelo futhi efuna ukuhlala kude nesiphithiphithi sasemadolobheni, kodwa futhi kube amakhilomitha ambalwa ukusuka enkabeni yedolobha.
4.83(29 okushiwo abanye)
Leli dolobhana elisemaphandleni liwukudla kwanoma yimuphi umhloli wamazwe oshisekayo, hamba emigwaqweni yasemakhaya eya emasontweni namathempeli aseduze. Bheka abalimi bendawo abalima izitshalo zabo. Ungabona futhi izakhamuzi zendawo zidoba emachibini aseduze.
Sitholakala 24/7 ocingweni noma umlayezo uma udinga noma yiluphi usizo noma iziphakamiso mayelana nokuthi yini ongayenza ngesikhathi uhlala e-Goa.
UCeliz Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Salvador do Mundo namaphethelo